कब्जियतको समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी समाधान गर्न सकिन्छ - Like For Nepal
कब्जियत भनेको जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ । झन् अहिले कोरोना महामारीको समयमा सबै जना घरमै बस्ने हुँदा विभिन्न परिकार बनाउने, चिल्लो, पिरो, मसालादार खानाहरुको सेवन गर्ने जस्ता बानीले पनि कब्जियतको समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसो त कब्जियत आफैमा कुनै रोग होइन । यो विभिन्न रोगका लक्षण हुन सक्छ ।
पाचन प्रणालीमा आउने समस्या नै कब्जियत हो । कब्जियतकै कारणले विभिन्न रोग निम्त्याउने पनि सक्छ । तर, खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिने हो भने कब्जियतको समस्याबाट टाढै रहन सकिन्छ ।
कब्जियतको समस्या भोग्नेहरुले पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ । बिहान उठ्नेवित्तकै पानी पिउनाले ग्यास्ट्रोकोलिक रिफ लेक्स उत्तेजित गर्छ । दिनमा ६–८ गिलास पानी पिउनु पर्छ । मध्यपान र ध्रमपानबाट टाढा रहनुपर्छ
Prevसुनिता श्रीमानसंग जान्छु भनेपछि रोए गोपि।पुरानै श्रीमती सम्झिदै गाए गित।सुनिता- गोपिको कस्तो प्रेम ?
Nextयी ६ फूलमा पाइन्छ औषधिय गुण, कुन फूलले पार्छ कुन रोग निको ? जान्नुहोस्